राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी नै निर्वाचित
झलनाथको आक्रोश– पार्टीमा सल्लाह नै नगरी केका आधारमा समझदारी भयो ? पार्टी हामीले पनि हाँकेका हौँ, के यो तपाईंको घर हो ?
शीर्ष नेताबीच ओलीको प्रस्ताव विद्यालाई सर्वसम्मत
झलनाथको आक्रोश पार्टी भनेको तपाईंको घर हो ?
ओलीको कुरा सुनेर आक्रोशित बनेका खनालले पार्टीमा छलफल नै नगरी त्यत्रो समझदारी कसरी भयो र अहिलेसम्म किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले इतिहासदेखि नै पार्टी पद्धतिका आधारमा चल्दै आए पनि अहिले कसैको घरजस्तो गरी चलाउन थालिएको आरोप लगाएका थिए । ‘पार्टी महासचिव र अध्यक्षका रूपमा मैले पनि पार्टी हाँकेको छु, अरू नेताले पनि पद्धतिका आधारमा पार्टी चलाएका थिए, तर तपाईंले सबै पद्धति मिच्नुभएको छ, कुनै नेताको राय पनि लिनुनपर्ने यो पार्टी के तपाईंको घर हो ?’ उनको प्रश्न थियो । खनालले आपूm राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहेको र यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक निकायमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । खनालको आक्रोश ओलीले खासै प्रतिक्रिया दिएनन्, बरु संसद् बैठकका लागि सबै नेता बानेश्वरतर्फ लागे ।
स्थायी समिति बैठकमा घनश्याम भुसालले पार्टी सञ्चानलको पद्धति मिचिएको भन्दै ओलीको शैलीको खुलस्त आलोचना गरेका थिए । उनको भनाई थियो, ‘पार्टी्भित्र अराजकता बढ्दै गएको छ, त्यसको नेतृत्वबाट अध्यक्षबाटै भएको छ । विधि, प्रक्रिया सबै मिचिएको छ । संसदीय दलको नेता चयनका लागि एक घन्टाअगाडि खबर पठाइयो । सांसदहरूलाई पूर्वसूचना दिएर निर्वाचनमण्डल गठन गरेर प्रक्रियासम्मत ढंगले दलको नेता चयन हुनुपर्ने होइन ? एक व्यक्ति, एक पदको सिद्धान्तकार ओली कमरेड नै हुनुहुन्थ्यो ।
तर, आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न प्रक्रिया नै मिचेर किन हाटहुट–साटसुट गर्नुभो । यसपटक संसदीय दलको नेतामा एजेन्डासहित तपाईंसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थेँ तर किन अवसरै दिइएन ? अहिले फेरि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न अन्तिममा मात्र बैठक बोलाइएको छ । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा बरिष्ठ महिला नेतृका रूपमा सर्वसम्मत गरौँं भनेर अष्टलक्ष्मी शाक्यले पटकरपटक अनुरोध गर्दा बैठक बोलाइएन । उहा“जस्तो नेताको रोदन क्रन्दनको पनि सुनुवाइ भएन । तर, आज विद्या भण्डारीको पक्षमा भने सर्वसम्मत गरिदिनुपर्ने ? यो शैली हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
राष्ट्रपतिका आकांक्षी खनाल र उनीप्रति सहानभूति राख्ने नेताहरूले पार्टी्भित्र कसरी अराजकता मौलाइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेपछि अध्यक्ष ओलीले कमजोरी स्वीकार गरेका थिए । ‘म सबैलाई मिलाएरै पार्टी चलाउँछु, वरिष्ठ नेताहरूसँगको परामर्शमै अघि बढ्छु, अध्यक्ष भइसकेको छु, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको छु, अब मलाई अरू केही पनि पद आवश्यकता पनि छैन, कुनै लोभ पनि छैन’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने,‘तपाईं (खनाललाई लक्षित गर्दै)को योगदानको पनि उचित मूल्यांकन र कदर हुनैपर्छ ।
– अधिकांश दलको समर्थन छ, अझै प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ भण्डारी
– नेपालीले अन्तर्घात जानेकै छ, मैले जित्न सक्छु राई
अन्य मत ४,२४८
– एमाले २३,३५६
– माओवादी १०,३१९
– संघीय फोरम ३,१८९
– जम्मा मत ५२,७८६
– आवश्यक २६,९२१